SafeWA App Download Ho an'ny Android [2022 Update] | APKOLL
Fampidinana fampiharana SafeWA ho an'ny Android [fanavaozana 2022]
Moa ve ianao mpandraharaha Venus ary voakasika ny orinasanao, noho ny areti-mifindra? Raha eny, eto izahay miaraka amin'ny fampiharana tsara indrindra ho anao, izay fantatra amin'ny anarana hoe SafeWA App. Io no fampiharana Android farany indrindra, izay ahafahanao mitantana mora foana ny orinasanao amin'ity toe-javatra misy ny areti-mifindra ity. Izy io dia manampy ireo mpampiasa hiditra amin'ny serivisy azo antoka amin'ny alàlan'ny finday Android sy ny takelaka.
Araka ny efa fantatrao tamin'ny faran'ny taona 2019, nisy tranga areti-mifindra tany Sina, izay saika nifehy ny toe-javatra. Saingy ny firenena hafa dia manomboka mihorohoro ho an'ny olony ao amin'ny firenena ary namoaka azy ireo hiala any, izay nahatonga ny valanaretina tany amin'ny firenen-kafa ary tao anatin'ny andro vitsivitsy dia niparitaka erak'izao tontolo izao ilay viriosy.
Na dia andro maizina indrindra ho an'ny firenena samihafa aza ny andro, ny olona rehetra dia miatrika ny toe-javatra ary mampihena ny fihanaky ny aretina. Nisy fiantraikany teo amin'ny sehatra rehetra eo amin'ny fiainana izany ary tsy maintsy mijanona ao an-trano mandritra ny volana maromaro ny olona, ​​izay nanakatona ny orinasa samihafa, ary very asa ny olona. Noho izany, tsy maintsy miady amin'ny toe-javatra isika ary miomana amin'ny toe-javatra ratsy kokoa.
Noho izany, eto izahay miaraka amin'ity fampiharana mahagaga ity, izay ahafahan'ny olona mamerina ny fidiram-bolany. Izy io dia manome ny endri-javatra sy serivisy tsara indrindra, izay manome ny mpampiasa hiditra amin'ny hetsika samihafa ary mampihena ny fiantraikan'ny viriosy. Raiso ny fampahalalana rehetra momba ity app ity avy amin'ity pejy ity ary ampitomboy ny fahalalanao.
Topimaso momba ny SafeWA App
Fampiharana Android izy io, izay manolotra ireo endri-javatra mifandraika amin'ny fahasalamana tsara indrindra ho an'ny mpampiasa mba hialana amin'ny fihanaky ny valan'aretina. Izy io dia novolavolaina manokana ho an'ny olona, ​​izay mikarakara hetsika samihafa, izay ahafahan'izy ireo manana manodidina azo antoka. Izy io dia sehatra misokatra, izay manome fidirana maimaim-poana ho an'ny rehetra.
Araka ny fantatrao dia misy hetsika samihafa mitranga manerana ny fanjakana, izay misy ny lalao, ny kanto, ny mozika, ary maro hafa. Tian'ireo olona ny mitsidika ireo toerana ireo ary ireo mpikarakara koa dia mahazo vola amin'ny fitantanana, izay no fomba tsara indrindra hahazoana ny vola miditra amin'ny firenena.
Safe WA App dia manome doka fisoratana anarana QR ho an'ireo mpampiasa, izay ahafahan'ny olona manatrika hetsika rehetra. Ireo mpitsidika dia tsy maintsy mizaha ny kaody QR-ny, izay ahafahan'ireo tompon'andraikitra manana ny angon-drakitry ny tsirairay. Ny angona dia misy ny anarana, fifandraisana, mail, data, ary maro hafa.
Ireo fampahalalana rehetra ireo dia azo antoka ao amin'ny lozisialy ofisialy, izay tsy misy ho an'ny rehetra. Ka noho izany, ny toe-javatra ratsy na ny valanaretina dia hanaraka mora foana ary ireo tra-boina rehetra dia azo zahana tsara. SafeWA Apk no dingana tsara indrindra hanohizanao hanatevin-daharana hetsika.
Izy io dia novolavolaina manokana ho an'i Aostralia, izay misy ny fanjakana rehetra. Noho izany, raha tsy eto amin'ny firenena ianao izao dia tsy mety aminao izany. Safe WA App Tsy miasa any amin'ny firenen-kafa, ny olom-pirenena aostralianina ihany no afaka mampiasa an'ity rindranasa ity sy ny serivisy rehetra misy.
Misy endri-javatra hafa an-taonina misy ao amin'ity rindranasa ity, izay azonao zahana ao. Noho izany, sintomy ity rindrambaiko ity ary tadiavo ireo fiasa rehetra. Raha mbola manana fanontaniana momba an'ity fampiharana ity ianao dia mifandraisa aminay amin'ny alàlan'ny fizarana fanehoan-kevitra hita etsy ambany. Hodinihinay haingana araka izay tratra ny olana rehetra sy ny fangatahana ataonao.
Anaran'ny fonosana au.gov.wa.health.SafeWA
Developer Departemantan'ny Fahasalamana Aostralia Andrefana
Fampiharana fanaraha-maso ny areti-mifindra tsara indrindra
Aretina amin'ny endrika fiarovana tsara indrindra
Tsidiho ny hetsika tsy misy tahotra
Fomba fisoratana anarana mora
Mitaky fampahalalana momba ny fahasalamana
Voaro mafy ny angona
Hita ao amin'ny Google Play Store izy io, saingy tsy mila mandany fotoana ianao. Izahay dia hizara ny dingana fampidinana haingana indrindra aminareo rehetra. Noho izany, tadiavo fotsiny ny bokotra fampidinana, izay misy eo an-tampon'ny sy ity pejy ity. Mila mikitika azy fotsiny ianao ary manomboka ao anatin'ny segondra vitsy ny fisintomana.
SafeWA App no ​​fampiharana tsara indrindra hamerenana amin'ny laoniny ny zava-drehetra. Noho izany, raha manana olana ara-pahasalamana ianao, dia lazao amin'ny antsipiriany izany. Mety hisy fiatraikany amin'ny olon-kafa, izay tsy zavatra tsara. Ka araho ny endri-javatra rehetra misy ary ankafizo ny fomba fiainanao.
Sokajy Apps, Fahasalamana & Fitness Tags App azo antoka WA, SafeWA Apk, SafeWA App Post Fikarohana
Ampidino ny fampiharana Omg Burse ho an'ny Android [Make Money 2022]
Glory Of Generals 3 Apk Download maimaim-poana ho an'ny Android